Fiombonambe Eropeana-Ukraine: Resaka fifanatonana. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2009 10:47 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Nambara ampahibemaso tao amin'ny EU-Ukraine Summit tany Paris tamin'ny 9 septambra ny fikasan'ny Fiombonambe Eropeana hanamafy ny Fifanekem-piaraha-miasa miaraka amin'ny Ukraine tamin'ny 2009. Fomba samihafa no nentin'ny haino aman-jery sy ny mpitoraka blaogy maro nandray izany.
“Manolotra antoka ho an'i Ukraine ny Fiombonambe Eropeana,” hoy ny lohatenin'ny BBC. “Tsy mampanantena na inona na inona an'i Ukraine diso manantena fatratra ny EU,” hoy ny nosoratan'ny Irish Times. “Manely honohono tsara lahatra ny EU nefa fifanarahana tsy voafaitra mazava no narosony an'i Ukraine,” hoy ny fanamarihan'ny Deutsche Welle. “Manome fanantenana ny amin'ny hoavy ho an'i Ukraine ny EU nefa tsy misy miatso azy ambony latabatra,” hoy ny The Times mamàrana.
Ny tombana amin'ny ampahany ratsy amin'ny vokatry ny fohaonambe dia avy amin'ny fanapaha-kevitry ny EU ny tsy hampiditra ny teny hoe “vinavinam-pirotsahana” ao amin'ny fanoritsoritana ny fifandraisana hisy eo amin'i Ukraine sy ny EU – fehezanteny iray, raha araka ny hevitr'i Vitaly avy ao amin'ny The 8th Circle, mamaritra tsara ny hetaheta ho eropeana ananan'i Ukraine ho toy ny zavatra iray hafa mihitsy miohatra amin'ny hoe hevi-dravina fotsiny:
[…] Raha amiko manokana dia tsy mahagaga izany. Miaraka amin'ny Fiombonambe Eropeana mbola mitsakotsako sy mandevona ny onjam-pivelarana tamin'ny 2004 sy 2007, tratran'ny soritr'aretin'ny faharerahana Romania-Bolgaria, ary mila mamaha ny olana nateraky ny fifidianan'i Irlande manohitra ny “Fifanarahan'i Lisbon constitution“, tsy maintsy hampihaoka handoa ny hiresahana momba ny “enlargement vina” ho an'ny firenen-kafa, indrindra ireo tahaka an'i Ukraine manana vahoaka be 46 tapitrisa na i Tiorkia manana vahoaka 70 tapitrisa. Nefa ny firenena kelikely, toa an-dry Serbia miaraka misy mponina 7 tapitrisa, dia manana vina mifototra tsara amin'ny zava-misy kokoa tahaka ny nitateran'i Mr. Barroso azy ho antsika vao tsy ela akory izay[…].
Ny The 8th Circle koa dia manondro antony hafa andavana ny Vina eropeana momba an'i Ukraine – ny krizy politika any Ukraine ankehitriny – nefa koa manohana fa ny zavatra lalovan'ny Ukraine amin'izao fotoana izao dia misy ifandraisany kely ihany amin'ny valeurs Eropeana:
[…] Fanampin'izany, tsy dia mivotra mivaingana loatra ny hoe fa maninona ny fisintahan'ny iray amin'ireo ao anatin'ny fifanekena, sy ny ho vokatry ny fanaovana fifidianana alohan'ny fotoana no TSY ho ohatra iray amin'ny valeurs itovizan'ny Ukraine sy ny IE. Amin'ny maha demokrasia miaraka amina fifaninanana azy , malalaka sy marina, miezaka ny hahita vahaolana mifanaraka amin'ny lalàna izay hahafa-po ny mpandray anjara rehetra amin'ny politika i Ukraine.
Ity dia processus demokratika tsy maintsy lalovan'ny firenena demokratika rehetra, raha te-hihoatra ny vala famaritan'ny mpamari-toetra “tetezamita” izy. Ny demokrasia mafy orina, toa ny any Kanada sy Japana amin'izao fotoana dia samy mandalo izany fiaraha-mitantana/fifidianana alohan'ny fotoana izan, ary Belzika tamin'ny taon-dasa dia nandany 196 andro mba handrafetana fifanekem-piaraha-mitantana, ary efa tany amin'ny 208 andro mihitsy aza tamin'ny 1977 . […]
J Clive Matthews avy amin'ny Nosemonkey's EUtopia dia mieritreritra fa tokony hampiasa fomba fifanantonana “pratique” kokoa ny EU amin'ny fifampiresahany amin'i Ukraine:
[…] Tsy mba sahala amin'ireo firenena kely Albania sy Masedonia ve fa mpisolantsolana i Ukraine? Zaza tsy niriana raha oharina amin'i Serbia, firenena natsangana tamina ady sivily sy fandringanana ary mbola ao anatina fifamaliana amin'ny EU momba ny fijoroan'i Kosovo?
Ie, fisaorana be dia be ho an'izany. Tena mampahery be. Zavatra milay.
Mety ho loharano hampandroso any amina fahafahana demokratika lehibe kokoa sy hanamafy ny fananana iombonana ny fanomezan-toky amin'ny fidirana ao amin'ny EU. Nefa mila atao ilay fanomezan-toky. Fomba efa natao sy nahitam-bokatra ho fampanekena ny olona ny fampiasana ny teknikan'ny karaoty sy tsora-kazo mba hahazoana izay andrasan'ny tena aminy – ary mandaitra amin'ny firenena ihany koa io. Fa amin'ny resaka Ukraine, toa sarisary fotsiny ny karaoty ambaran'ny EU – mandritra izay fotoana izay, fantatry ny Ukraniana fa i Rosia dia sady manana hazo no manana karaoty, ary tsy matahotra ny mampiasa izany.
Taras avy ao amin'ny Ukrainiana dia mandray fomba fijery masiatsiaka raha miresaka ny fahombiazan'ny mpanao pôlitika Ukrainiana:
[…] Azo antoka fa tsy ho mpifidy Euro[Euro-choosers] ny mpangataka Euro [Euro-beggars]. Indrindra raha tonga miaraka amina zavatra misavoritaka be toy izany hiresaka ambony latabatra hanao adivarotra ianao.
Mandritra izany, avelao ny oligargue-n-tsika mba hividy ampahany kely amin'ny Monaco. Angamba mba mety hahazo anjara hiditra ho ao amin'ny UE koa isika avy eo? […]
Misy ampahany amin'ny hafatra eto ambony no valin-kafatra mitavozavoza sy tsy amin'ny fotoanany, amin'ny fomba fijery miabo avy amin'i Victor Yushchenko amin'izay teny nambàran'i Nicolas Sarkozy amin'ny anaran'ny EU tany ampamaranana ny Fihaonambe. Namoaka horonantsary fanadihadiana nataon'ny iray amin'ireo fahitalavitra Okrainiana i Ukrainiana ary nanome dikanteny Anglisy an'ilay feo lafika Okrainiana mandika ny tenin'i Sarkozy:
Filoha frantsay Nicolas Sarkozy: Ity fifanekem-piaraha-miasa ity [hosoniavina amin'ny 2009] tsy manidy izay mbola mety ho làlana hafa, na koa manokatra hafa. Izay ihany no azonay lazaina.
Filoha Ukrainiana Viktor Yushchenko: Tena nahafa-po be anay ny zavatra azonay androany.
Hay nefa, na teo aza izay rehetra izany, diso ny fandikana ny fanamarihan'i Sarkozy, ary iny fandikana diso iny avy eo no naelin'ny mpampahalala vaovao Okrainiana sy ireo mpampahalala vaovao Tandrefana sasany ( ato ny fanazavana bebe kokoa momba an'io). Ny loharanon'ny fanambàrana – “[…] cet accord d’association ne ferme aucune piste, que même il en ouvre” – midika hoe “[…] tsy manapaka làlana ity fifanekena fifanaraham-piaraha-miasa ity, fa manokatra ny sasany kosa aza.”
“Andao ary hojerena ny dikan'izany araka izay tena tokony ho izy” , hoy Ukrainiana mamarana rehefa avy namoaka fanitsiana.
Mino ny The 8th Circle fa tokony hijanona hifamatotra foana amin'ireo Tatsinanana mpifanolo-bodirindrina aminy ny EU ary ny Fiaraha-miasan'ny samy Tatsinanana, vivavinan'ny Poloney sy Soisa, dia mety ho dingana iray ho amin'izany zotra izany. Ity ny antony:
[…] Ity fiaraha-miasa ity dia haneho mihoatra noho ny zavatra rehetra fa mitazona foana ny maha mpialoha làlana azy eo anatrehan'ireo “firenena mpifanolo-bodirindrina” aminy ny UE, izay ahitàna taratra fahasamihafana maro karazana eo amin'ny atao hoe fandrosoana demokratika sy ara-toekarena.
Mariho koa fa ny resaka eto tsy hoe momba ny fampanantenana fandraisana ho mpikambana na ho mpilatsaka ho mpikambana – toy ilay iray izay nataon'i Barroso manoloana an'i Serbia – fa kosa momba ny fanairana ireo mpanao pôlitika ao Kyiv sy ny valalabemandry Okrainiana fa hoe raha tian'izy ireo ary manao ny fanovàna tena andrasana aminy izy ireo, dia hitondra aina ho amin'ny hoavy ny UE. […]